प्रायोजित दुष्प्रचारको शिकार शैलुङ कन्स्ट्रक्सन - Jhilko
प्रायोजित दुष्प्रचारको शिकार शैलुङ कन्स्ट्रक्सन
६ पुष,२०७६ 93 0
१९ पुस, भक्तपुर । भनिन्छ, देशको मुहार हेर्न शहरका सडक र मान्छेको हैसियत हेर्न उसको ट्वाइलेट हेरे पुग्छ । निश्चय नै नेपालका सडकहरु त्यति नै समस्याग्रस्त छन्, जति नहुनु पर्दथ्यो । सडक समस्याका अनेक कारण छन् । तर, केही मिडियाहरु ठेकेदार मात्रैलाई सडक समस्याको कारक र कारण मान्छन । अझ केही ठेकेदार मात्रैलाई समस्याको सम्पूर्ण जिम्मेवार ठहर गरिदिन्छन, न्यायधीशको शैलीमा । अनि तिनै मिडियाहरु आफूलाई कथित अव्वल व्यावसायिक र विकास मैत्री भएको भ्रममा बाँच्छन ।
नेपालका केही सडक खण्ड निर्माण, पुर्ननिर्माण र बिस्तारको जिम्मा पाएको एउटा निर्माण कम्पनी हो शैलुङ कन्स्ट्रक्सन । त्यसका प्रमुख हुन शारदाप्रसाद अधिकारी । संयोगले उनी नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई घर भाडामा दिने एकजना घरधनी पनि हुन । उनी जनयुद्धका सहयोगी पनि हुन् । शहीद परिवारका सदस्य त हुन नै ।
तर, यति कारणले काम गर्दागर्दै पनि बदनामीको भारी बोक्न विवश छन् उनै शारदाप्रसाद अधिकारी । उनले कति ठाउँ जिम्मा पाएको काम समयमा पूरा गरे भन्ने कुनै समाचार बनाउँदैनन् उनका विरोधी मिडियाहरु । जहाँ जहाँ काम जारी छ, त्यहाँ त्यहाँ फोकस गरी गरी जर्बजस्ती समाचार उधिन्छन शारदाप्रसाद विरोधी मिडियाहरु । केही समयअघि उनी कथित मूलधारका भनिने मिडियाको निशानामा परे । उनलाई पछिल्लो समय लगातार प्रहार गर्नेमा एक समय उनीबाट राम्रै लाभ लिएका पनि छन् । लाभ पाउन्जेल चुप, लाभ नपाएपछि वा पाउन छोडेपछि ठोक्ने पत्रकारिताको अभ्यासमा रमाउनेले पनि जनतामा केही भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन्
१५ किलोमिटरको उक्त सडक लामो समयसम्म स्थानीयको अवरोधका कारण बन्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । रुख कटानदेखि सम्बन्धित सरोकारवाला सरकारी निकायहरुको असहयोगी काम व्यवहारले पनि उक्त सडक बिस्तारमा ठेकेदारलाई काम अघि बढाउन मुश्किल भएको तथ्य पनि बिगतमा नै सार्वजनिक भएकै हो । तर भ्रमण वर्ष २०२० को सन्दर्भ जोडेर अहिले फेरि काम गरिरहेको निर्माण कम्पनी र त्यसका प्रमुख अधिकारीलाई खुइल्याउन र बदनाम गराउन एक अनलाइन भए, नभएका कथा बुनिरहेको छ ।
अबका केही महिनाभित्र उक्त सडकखण्ड बिस्तार पूरा हँुदैछ । अहिले रातोदिन काम भइरहेको छ । योजनाबद्ध प्रचार गरिएको भिडियो आफै बोलिरहेको छ, जहाँ काम भइरहेको छ, द्रूत गतिमा । एकातिर सडक निर्माण तथा बिस्तारको काम रफ्तारमा भइरहने, अर्कोतिर दैनिक आवागमन पनि जारी रहने । यसो हुँदा सडकमा धुलो उड्नु स्वाभाविक हो । तर, केही निहुँ नपाएर अहिले धुलो उडाएर काम गरे भन्दै एउटा मिडिया अधिकारीको अहोरात्र कामको कुप्रचार गरिरहेको छ । दृश्यले काम गरिरहेको देखाउँदा देखाउँदै प्रायोजित समाचारमा प्रचण्डसम्मलाई जोडेर बदनाम गराइन्छ ।
धुलो नउडोस र त्यसले स्थानीय जनाताको स्वास्थयमा नकारात्मक असर नपारोस भनेर निर्माण कम्पनीले सडक बिस्तार क्षेत्रमा दैनिक पानी हाल्ने गरेको पनि समाचारमा नै जनाइएको छ । तर, २४ सै घण्टा पानी नहालेको झैं गरेर तथ्य तोडमोड गरेर, काम हुनु भन्दा अघिका पुराना दृश्यहरु समेतलाई जोडेर प्रचार भने गलत गरिएको छ ।
निर्माण तथा बिस्तारको काम भइरहदा सडक किनारामा निर्माण सामाग्री राखिनु र दिनरात काम भइरहदा हिउँद ऋतुमा अलि अलि धुलो उड्नु कुनै अप्राकृतिक प्रायोजित घटना होइन । तर, ठेकेदार कम्पनीलाई बदनाम गराउन काम गर्दा पनि लाग्नु चाहि कति जायज हो त ?
वर्षौसम्म चावहिल जोरपाटी सडक बनेन । यस्ता कैयन सडक छन, जो समयमा काम नहुँदा स्थानीय पीडित छन । तर त्यतातिर आलोचक मिडियाको ध्यान पुगेन । केवल भक्तपुर नगरकोट सडकमा मात्रै सबैका ध्यान गए । देशैभर यस्तै हालत छ । यो साझा समस्या हो । तर प्रचण्डको रिसले शारदा प्रसादलाई हतोत्साही गर्ने गरी मिडिया आक्रमण हुनुले नेकपा सम्वद्ध भएकै कारण उनी निशानामा परेको स्पष्ट छ । अझ आफूलाई असली जनवादी वाम समर्थक भन्ने मिडियाहरुले त लाभ पाउन्जेल चुप, लाभ पाउन छोडेपछि शृङ्खलावद्ध आक्रमण गर्ने अघोषित अभ्यास नै भइसक्यो ।
वहालवाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङले भक्तपुर नगरकोट सडक खण्डको भइरहेको कामप्रति संतोष मात्रै जनाएनन्, राज्य संरचनाले ठेकेदारलाई अप्ठ्यारो पार्ने होइन, गाँठो फुकाउनुपर्ने भन्दै मातहतका निकायलाई निर्देशन सकेत दिए । ठेकेदारको पछिल्लो कामका उनले खुलेर प्रशंसा समेत गरे । निर्धारित समयमा काम पूरा हुनेमा विश्वस्त भएका मन्त्री नेम्वाङले ठेकेदार मात्रैलाई दोष दिएर नहुनेमा आफू सहमत भएको पनि उल्लेख गरे । उनले सरकार ठेकेदार कम्पनीहरुका समस्या समेतलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न तयार रहेको भन्दै निर्माण व्यासायीहरुप्रति उदार, लचक र सहिष्णु नै देखिए ।
तर, पनि केही मिडियाहरु सौताको रिसले पाइको काख फोहर गर्ने शैलीमा शारदाप्रसादलाई निरन्तर अक्रमणको निशाना बनाइरहेका छन । यसले शारदाप्रसाद प्रायोजित दुष्प्रचारको शिकार भएको तथ्योद्घाटन गर्छ । एकजना ठेकेदारको कामलाई पूर्वाग्रही रुपमा सधै बदनियतपूर्वक दुष्प्रचार गरिरहने हो भने यसले समग्र निर्माण व्यवसायीहरुमा कस्तो नकारात्मक असर पार्ला त ? के प्रचण्डको रिसमा वा प्रचण्डलाई बदनाम गराउने नाममा सधै शारदाप्रसादले बदनामीको भारी मात्रै बोक्दै काम नगर्ने भनेर मात्रै पगरी गुथ्नुपर्ने हो त ?
कम्तिमा काम गरिहेका छन भने उनको कामको आधारमा स्यावासी दिने वा मन पर्दैन भने वास्ता नगर्ने गर्न मिल्दैन ? कुनै पनि ठेकेदारले अकारण काममा ढिलाइ गर्छ भने ऊप्रतिको आलोचना जायज हुन्छ । तर, सधैभभरि हिर्काउने, ठोक्ने अनि लाभ लिने खाले मात्रै पर्चाकारिताले त समस्यालाई झन् चर्काउँछ नि, चर्काउँदैन र ?
भक्तपुरमा स्कुटरको ठक्करले भारतीय नागरिकको मृत्यु
समायोजन रोजेका उपसचिवलाई पत्र दिइँदै
३ फाल्गुन,२०७५0306
प्रधानमन्त्री ओली झापा–मोरङ भ्रमणमा
१ चैत्र,२०७५0225
दुईदिने झापा–मोरङ बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकास्थित...
प्रश्नपत्रबाहिर ल्याउने पत्ता लाग्ने – सिआइबी
१ चैत्र,२०७५0390
“तीव्रताका साथ अनुसन्धान भइरहेको छ, प्रश्नपत्रबाहिर ल्याउने कार्यमा संलग्नहरुको...
नागर्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर चुनिए नेटबल संघको...
१ असार,२०७६0229
नेपाल नेटबल संघको दोश्रो चुनावी साधारण सभाले नागर्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर...
जेठाजूले बुहारीलाई छाउगोठ पठाउँदा...
६ माघ,२०७६03